Hevitra MPANOHARIANA | Kolontsaina | 3
Mpampianatra tsy mpanabe?
2013-02-20 @ 09:21 in Kolontsaina
Fony mpankafy nijery sarimihetsika tamin'ny fahitalavitra ny tena dia natao toy ny fanalan'andro fa noheverina tsy hisy izany hoe mpampianatra masiaka dia masiaka amin'ny mpianatra mbola zaza izany. Matetika moa rehefa misy ilay mpampianatra masiaka dia masiaka, dia eo akaikiny eo mandrakariva misy mpampianatra tsara fanahy amin'ny mpianatra ary miezaka ny hanalefaka ny habibian'ilay mpampianatra notononina voalohany. Noho ny maha-an'ny ankizy ilay sarimihetsika dia mandresy hatrany ny zaza any amin'ny farany ary ny zaza ihany amin'ny ankapobeny no nitady tetika hanasaziana ilay mpampianatra (na tale) saro-po. Tsy noheverina tena hisy amin'ny fiainana andavanandro, indrindra fa hoe eto Madagasikara, izany toe-java-misy izany raha tsy nanatri-maso mivantana ny tena.
Ao amin'ny sekoly tsy miankina iray eto Antananarivo, Madagasikara,no ahitana mpampianatra vehivavy iray nahavariana ihany ny fihetsiny. Manana zanaka vavy hanala ny fanadinam-panjakana voalohany izy, ary izy ihany no mpampianatra ny zanany. Raha ny ray aman-dreny amin'ny ankapobeny no mahafantatra izany dia hieritreritra avy hatrany fa ho tsara fampianarana ny zanany eo ambany fitantanan'izany ramatoa mpampianatra izany. Hentitra dia hentitra amin'ny mpianatra izy mba hianaran'ny ankizy tsara sy hahatsapan'ireo mpianatra ireo fa tsy zava-kitoatoa eo amin'ny fiainam-pianarana izany hoe hanala fanadinam-panjakana izany. Hahatsiaro menatra ihany koa ny ray aman-dreny raha ny zanany no tsy afaka amin'ny fanadinam-panjakana toy izany. Nandiso fanantenana tanteraka anefa ny fihetsiky ramatoa mpampianatra fa lasa toy ny manao zavatra tafahoatra izy ary toa azo lazaina ho mivadika fankahalana olona mbola zaza indray aza ny fihetsika ataony.
Tamin'ny kilasy mialoha ity kilasy fanalana fanadinana voalohany ity dia efa nanao fanampim-pampianarana izy (cours fa ny ilazany azy ho an'ny mpianatra dia hoe manao suivi izy), andoavam-bola fanampiny ankoatra ny saram-pianarana izany mazava loatra. Nahazo laharana ambonimbony ny zaza tamin'izany fotoana satria atao hoe voara-maso tokoa ny zaza. Rehefa nigadona amin'ny taom-pianarana fanalana fanadinana, niova ny tantana fa nanomboka nanana fotoana ka nanapa-kevitra ny hanara-maso akaiky ny fianaran-janany ny renin'ny zaza. Mihevitra noho izany ny renin'ny zaza fa noho ny fananany fotoana amin'izay dia omeny ny fahavononana feno hiatrika ny fanadinana ny zanany, hanampy azy hahazo ny lesona sy hanampy ihany koa ny fanazavana ary hanadina ihany koa. Tsapa anefa fa tsy tahaka izay no nandraisan-dramatoa mpampianatra ny resaka. Niova ny fomba fifandraisan'ny zaza sy ny mpampianatra satria toa nilanila vaniny tamin'ireo mpianatra tsy manao suivi ramatoa. Tsy maninona hoe fomba fijery mitongilana no hotantaraina saingy izay mitaraina aloha no henoina...
Nanomboka tamin'ny hoe izay miteny malagasy ao amin'ny faritry ny sekoly dia mandoa vola ariary zato aminy. Any am-piasana aza tsy azo atao ny fanasaziana ara-bola afa-tsy noho ny fahabangan'ny vola amin'ny asa atao. Dia ny sary kely rehetra (saritanin'i Madagasikara na firan'ny taova isan-kazarany toy ny fo, havokavoka) sns ihany koa izay ahatafidirana sary dimy eo ho eo ny refin-taratasy A4 iray dia vidiana ariary zato tsirairay... nefa ny sary amin'io tsy mazava tsara akory fa manjavozavo tsy hay vakiana. Isaky ny fanadinana dia asainy mitondra 700 ariary isan'ankizy isaky ny fotoam-panadinana hamaliana ny fanontaniana ihany koa ny mpianatra (izany hoe ariary zato ny iray amin'ny taranja fito ampianariny, marihiko etoana fa fanapaha-keviny samirery io fa tsy politika ankapoben'ny sekoly).
Indray mandeha moa dia efa nisy boky fanomanana fanadinana efa nandrasan'ny sekoly hatry ny ela. Vao nisy mpianatra iray nahazo dia nolazaina fa tsy maintsy mitondra io boky io avokoa ny mpianatra rehetra ny ampitso maraina. Andro alarobia io fotoana io ary tsy maintsy mitondra ny boky ny mpianatra ny alakamisy maraina. Noho izay mety ho antony samihafa tany amin'ny tokantrano tsirairay tany dia tsy afa-nitondra ny boky ny 40% eo ho eo amin'ny mpianatra iray kilasy ny alakamisy maraina fa navoakany niaraka tamin'ny kitapo dia nasaina niloloha tanana teo ivelany teo mandra-pahavitan'ny ankizy nitondra boky ny zavatra natao tao amin'io boky io. Nolazaina moa ireo mpianatra ireo fa tsy ilaina miverina any an-tsekoly izay mbola tsy manana ilay boky ny hariva... ary dia nisy tokoa moa ny tsy niverina satria mbola tsy nahazo. Ny nampihomehy mahasosotra tamin'ny nataon'ny ramatoa mpampianatra dia hoe tsy mahazo manao ny devoara tsy natao tamin'io andro io intsony ny mpianatra tsy nitondra ilay boky.
Tia manao fety io sekoly io. Tsy maintsy manomana fanamiana vaovao hatrany isak'izany fanaovana fety izany. Tsy maintsy ampanjairina ny fitafiana satria zavatra tsy ho hita eny amin'ny mpivarotra mihitsy no atao. Nanao tsara tokoa ny tena tamin'ny fety mialoha ny krismasy satria mba fetin'ny faran'ny taona io... Nanomboka tapaky ny volana janoary indray dia efa nampiomanina ny ankizy fa tokony hanana fitafiana lokon'i Brezila na lokon'ny telma ny ankizy tsirairay avy amin'ny fetin'ny talata matavy. Tsy nofariparitana mazava moa ny didy anaovana ny akanjo fa dia izay loko izay no nohitrikitrihina. Tsy naka sarotra ny renin'ny zaza fa nividy izay azo novidiana. Tratry ny fanaviana ny zaza ny alatsinainy mialoha ny talata matavy ka tsy nalefan'ny ray aman-dreniny tany an-tsekoly. Ny talata andron'ny fety vao nankany fa levilevy no niandry, tsy ilay akanjo novidiana no nanaovana fa akanjo lava tanana ary nampanaovina akanjo mafana manara-batana [solo-pataloha] miloko mena satria zaza vao avy narary. Nasaina nesorin'ilay mpampianatra anefa ilay akanjo manara-batana satria tsy loko telma io na loko brezila ary voasazy fa ahena 40 ny isa ankapobeny azo tamin'ny fanadinana (izay notontosaina ny andro alakamisy mialoha ny talata matavy) . Noho ny tsy nanatrehany ny fianarana ny alatsinainy mialoha ny talata matavy dia mbola nahena 40 ihany koa ny isa ankapobeny azo tamin'ny fanadinana. Izany hoe mihena 80 izany ny isa ankapobeny tamin'ny fanadinana andrana nataony. Efa nilaza mialoha izy fa izay ankizy tsy mahazo ny salan'isa ampy dia tsy maintsy manao ny suivi ary tsy karakaraina ny taratasy hanalany fanadinana. Tonga dia hoy ny eritreritry ny renin'ny zaza hoe: "Angamba nahazo isa ambony be ny zaza dia ahintsana ny isa ankapoben'ny zaza". Mifanindran-dalana amin'izany kosa dia nolazainy fa omena fanampin'isa 40 tamin'ny fanadinana natao ireo ankizy nahafinaritra ny fomba fiakanjony tamin'ny fetin'ny talata matavy. Dia izay no zava-misy mba tiana nampitaina fa afaka mitsikera na ramatoa mpampianatra isika na ny renin'ny zaza...
Ilay fitafiana nahavoasazy
Jentilisa 20 febroary 2013
2010-11-06 @ 22:33 in Kolontsaina
Nitsidika ny Lapan'i Manjakamiadana ny tena ny andron'ny Asabotsy 6 novambra 2010 izay androm-pahatsiarovana azy rahateo. Maimaipoana ny fankanesana teny sy ny fahazoana naka sary ka dia nanararaotra ny tena. Indreto sary vitsivitsy no aseho anareo.
Ireo olona liana nijery fandaharana tamin'ny fanarenana ny rova araka ny ahafantarana azy.
Ny eo an-tokonam-baravarana kosa.
Endrika andohalambo eny
Varavarambe mivoaka miatsinanana
Ahitana an'i Mahitsielafanjaka
Avaratra kosa ny tranomanara
Na ny Lapan'Andafiavaratra
Nakisaka ho avaratra atsinanana ny Fitomiandalana raha atsinanan'ny Lapa taloha
Aseho avy amin'ny Andohalambo indray
Fa ny any atsimo manakory?
Fanatazan-drano hatraty anatiny
Nasiana tohatra hatrao anatiny rihana voalohany
Ary ny vavahady andrefan'i Mahitsielafanjaka
Indray andro, hono, Asaramanitra
2010-09-09 @ 23:36 in Kolontsaina
Mety ho gaga ny maro raha manoratra Asaramanitra amin'ity antenantenan'andro ny tena. Misy antony kely anefa raha nanoratra aho na dia teo dia teo aza ny hakamoana tsy te-hanoratra. Maro sahady ny toe-draharaha sy zava-nitranga teto amin'ny firenena saingy tsy voasoratro ireny, toy ny fahalasanana artista fanta-daza. Tsy midika velively izany fa tsinontsinona ireny na zava-bitika eto amin'ny firenena. Ny antsipirian-javatra tsy sahin'ny gazety natao lohateny lehibe aza no tena maresaka eto amin'ny tanàna rehefa mifampiresaka ny olona nanodidina ahy, dia ilay horakoraka nitranga tao amin'ny Lapan'ny kolontsaina. Saingy ialàna tsiny indrindra raha tsy manitatra loatra momba iny raharaha iny aho fa anjaran'ny tsirairay no mamakafaka. Tsy manakana anao tsy hiady hevitra koa anefa izany.
Hiverina any amin'ny ambaran'ny lohateny amin'izay aho. Raha teo amin'ny kolontsaina Malagasy (Merina angamba no marina kokoa) dia ny andro fahasivy amin'ny volana fahasivy tamin'ity taona ity no Asaramanitra Merina izay arahin'Anosimanjaka amin'izao fotoana izao raha ny reko, nefa, tamin'ny namakiako ny boky fahiny momba an'Andrianampoinimerina dia ny Fandroana ihany koa izay notapahiny hankalazain'ny rehetra teo ambany fahefany. Ny tsaroako indrindra manko dia nifanindry amin'ny Eidy Miozolomana mandrakariva io Fandroana na Asaramanitra nankalazaina teto Afovoantany io. Nisy ny nametraka na nampiely andro hafa ho Alahamadibe, ary nomena vahana tamin'ny haino aman-jery tamin'ny fotoan'androny (martsa-Avrily), saingy tsy nandresy lahatra ahy loatra ara-pahalalana izany (sady tsy nandresy lahatra ahy ara-pinoana na ara-kolontsaina rahateo). Taombaovao Malagasy tokoa ny Fandroana na ny Asaramanitra, ary nataon'ny taloha nifanindran-dalana tamin'ny taombaovao gregoriana... na dia tsy tena nahazo vahana teto loatra aza io fanisan'andro gregoriana io nialoha ny fanjanahantany.
Dia marihiko indray mandeha ihany koa fa nanana ny lanjany tamin'ny Malagasy, indrindra teto afovoantany, io Asaramanitra io fony Faha-Mpanjaka. Tsy anavahana io na kristiana ianao na mpandala ny nentin-drazana fa tamin'io fotoana io no niezaka namonjy ny tany niaviany avokoa ny any am-pielezana rehetra sy izay nila ravinahitra toerana lavitra any fa fihaonan'ny fianakaviana manontolo io... izany hoe samy namonjy ny ambanivohitrany avokoa ny Malagasy tsirairay tamin'izany fotoana izany mba hifety. Mazava loatra fa rehefa vory lanona ny fianakaviana dia misy ny omby vonoina ary makotrokotroka avokoa ny fety any an-tokantrano tsirairay avy any. Hevitro manokana dia niainga avy amin'ity fandroana ity no nahatonga na nampiroborobo ny famadihana amin'izao fotoana izao. Mazava loatra fa raha miteny hoe hevitra aho dia tsy voatery ho izay no marina, nefa avoakako ihany ilay hevitra hifampidinihan'ny rehetra.
Tamin'ny voalohany dia manaraka ny volana ny fanavahana ny andro sy ny volana ka tsy atao mahagaga raha niovaova ny toerana misy ilay taombaovao. Tsy hatao hamaky loha antsika ny fanazavana lava fa hevero ho toy ny fifindrafindran'ny fetin'ny Paska eo amin'ny Kristiana no mba ifindrafindran'ny taombaovao ihany koa tamin'izany fotoana izany. Ny somary iavahany dia eo amin'ny fotoanan'ny Paska izay eo anelanelan'ny tapaky ny volana martsa ka hatramin'ny tapaky ny volana Aprily mandrakariva mandavataona, ny taombaovao na ny Eidy kosa tsy voafetra tahaka izany fa dia jerena fotsiny hoe aiza no tsinana ny volana manaraka ny antokon-kintana Alahamady dia izay. Nosimbain-dRanavalona fahatelo izany tamin'ny fotoana nanjakany ka navadiny ho fotoana raikitra (manaraka ny fanisana gregoriana) ny fanatontosana ny Taombaovao malagasy (merina) dia ny 22 novambra izany. Narahin'ny ambanilanitra mandrakariva ireny fanapahan'ny Andriamanjaka ireny, na dia mety ho nanova zavatra be dia be teo amin'ny fisainan'ny vahoaka aza.
Mariho mazava tsara fa nandritra ny fankalazana ny taombaovao (fetin'ny fandroana) farany nialoha ny fanjanahantany indrindra (22 novambra 1895) no tena niroborobo ny fikomiana nataon'ny Menalamba voalohany hanoherana ny vazaha ka namonoany izay vazaha rehetra hitany sy ireo namofompofona vazaha rehetra. Tsotra ny antony nahamora ny famelona izany fikomiana izany, eo avokoa no tafavory ny fianakaviana ary amin'ny taombaovao ihany koa no be ny olona manao voady. Noho ny fahatsapana anefa fa voahitsakitsaka ny fiandrianam-pirenena (Hasin'Andriamanjaka eto) dia be ireo mahatsapa tena ho manana adidy amin'ny fanosehana ny mpanjanatany, toy ny hoe tsy afa-mifaly kosa aho raha ziogaina ny fireneko. Ny fotoana tahaka ireny ihany koa no mora ifanondroan'izay mitolona rehetra hanombohan-draharaha, sady fotoama-panombohan-draharaha indrindra ny fotoana tahaka ireny. Nisy koa moa no nilaza (Stephen Ellis) fa nandritra ny taombaovao malagasy manara-bolana ihany koa no namelomana ny fikomiana 29 martsa 1947 fa aleo ho anjaran'ny mpahay no manamarina na mandiso izany.
Fa inona kosa no nahalefy ity fetin'ny fandroana ity? Fantatry ny Frantsay fa ity taombaovao ity no karazana fety lehibe indrindra ho an'ny Malagasy (Anivontany indrindra indrindra) ka notapahiny fa hotontosaina isaky ny 14 Jolay isantaona ny fankalazana izany Fandroana izany. Ataoko fa tsy mila hazavaina amintsika ny hafetsena nananan'ny mpanjanatany tamin'izany lalàna napetraka izany. Raha somary tsinjovina ihany koa ny antonta-kevitra nisy dia nanaiky ihany ny maro saingy nisy hatrany ny nanao fandroana araka ny andro tondroin'ny mpahay azy an-tsokosoko, niova endrika ny antsoina hoe famadihana ka tsy ireo havana nilevina an-toeran-kafa no nafindra hiaraka amin'ny razambeny any amin'ny fasandrazany fa ireo razana ampasandrazana hatrany no nofonosina dia naverina tamin'ny toerana nametrahana azy. Dia izay ilay heveriko hoe nataon'ny mpandala nentin-drazana hiofo ho famadihana ilay fandroana tamin'ny andro fahiny saingy tsy dia an-kiteniteny loatra moa izany. Fantatry ny Frantsay ihany ny fisian'ny famadihana ka nametrak lalàna indray ry zareo fa amin'ny ririnina (efa fantatry ny mpanao azy hoe volana inona ka hatramin'ny volana inona moa izany) ihany no azo hanaovana ity famadihana ity. Dia jereo fa ny famadihana no lasa fotoana ifamorian'ny mpianakavy hatrany lavitra any, ary mampasiaka ny sasany mihitsy ny tsy fanaovana adidy amin'io fotoana io na dia andaniam-bola tokoa aza ny fanatontosana azy.
Fa somary zendana ihany ny tena, satria eo indrindra isika izao, raha nisy ny antso nataon'i Avoko hanaovana horakoraka ny mitataovovonan'ny zoma 10 Aogositra, satria mifanindry amin'ny taombaovao io fotoana niantsoany ny rehetra io, ary nolazainy ihany koa moa fa fotoana ivavahan'ny rehetra. Mampahatsiahy vinaninany ilay nanombohan'ny Menalamba. Saingy na eo izany na tsia dia Miarahaba ny rehetra ary nahatratra ity Taombaovao Malagasy ity, ary miarahaba ny Miozolomana amin'ny fankalazany ny Eidy... Sa tsy azoko atao izany?
Jentilisa, Zoma 10 Aogositra Septambra 2010 amin'ny 01: 35
Mafana fo indray
2010-06-01 @ 22:31 in Kolontsaina
Ainga namelombelona ny fon'ny mpitolona indray ny hiran'Ny sakelidalana mitondra ny lohateny hoe Tao anatin'ny tolona. Toa mifanaraka amin'ny zavamisy iainana anatin'ny tolona indrindra manko ny tonokira ka ireo tena mpitolona ihany no mahatsapa ny halehibeny sy ny fampaherezana ao anatiny. Toy ireny miaina tanteraka ao anatin'ny vanim-potoanan'ny 1947 ireny indrindra isika raha henoina ny tonokira satria hira natokana ho an'ny tia tanindrazana 1947 izy iny. Indro jerentsika sy vakiantsika anie ilay hira nampavitribitrika tampoka iny rehefa avy nidiran'ny miaramila efa-dahy ny Kianjan'ny Finoana teo amin'ny Magro Ankorondrano (Somary nahitsiko eo amin'ny lahatsoratra ambany).
Fa tao anaty aizim-pito
Feo nihiaka nikiaka fahafahana e!
Ren'ny tany manako eran-danitra e!
Ny kotroky ny basy
Nefa tsy kivy
ireo MALAGASY MITOLONA.
Nisy ra nipatrapatraka
Ny fahafahany mantsy no zahany
Nefa ra mikoriana mamonto tony tany
no hany fiadiany
Hahatomombana izay notakiany
Fa iry ery an-danitra
Efa lasa tara-pahafahana
Efa samy ravo
Ny fanahin'ireo maritiora mifaly
Ny todin'ny ra niombonana mantsy
tsy azo takonana intsony
Mazava loatra fa tsy hira vahiny nindramina io fa hira malagasy, nanana ny hakantony sy ny aingam-panahiny. Efa impiry nisedra basy moa ireo mpitolona ireo? Fa impiry no namaly tamin'ny tora-bato ireo olona noenjehina ireo? izany tokoa no hoe tanam-polo no hany fiadiany araka ny hira, impiry nandre feom-basy entina nampihorohoroana izy ireo fa tsy kivy sy tsy niato ireo Malagasy mitolona e! Hira avy amin'ireo sarambamben'ny mpitolona raha toa ka efa elaela ihany no nisy nampifandray ity hira ity amin'ny tolona izay atrehiny.
Fa angaha izay ihany? Moa va efa nahita ny lahatsarin'izy io ianareo? Izay efa nahita tamin'ny fahitalavi-pirenena tamin'ny androny moa mahatsiaro ny toerana nandraiketana azy ve? Trano rava eny ambanivohitra eny no nanatontosany azy. Ary ireo mpitolona mavitrika kosa aiza ho aiza no mihira azy? Eo anoloan'ny trano ravan'ny mpandroba indrindra, toa vao maika nampisy fietanam-po bebe kokoa. Trano rava toa endriky ny firenena rava, (jereo ny rohy) trano gasy raha jerena endriky ny firenena malagasy. Fa tao anatin'io trano rava io indrindra no anaovan'ny mpitolona ny hiaka hitadiavany ny fahafahana sy ny fitakiany hiverenana amin'ny ara-dalàna. Tsy tokony hahatsiaro menatra ve ny mpitondra ny basy raha mandre izao hira izao indrindra fa miverimberina io hira io? Angamba mety hosivanina tsy handeha amin'ny haino aman-jery tahaka ilay "Izay mihitsy" raha izao no mitohy.
Efa akaiky hoe ny mondial 2010 ka ho adinoin'ny lehilahy ny tolona? Ny vehivavy aloha no tena maro an'isa amin'ny mpitolona ka raha toa mahazaka tsy mijery mondial ny mpitam-piadiana dia mety hahafinaritra ny fandehan'ny raharaha. Sa mba ahoana ny hevitrao?